Tingashandisa sei and injini - China Changzhou anoshuva Motor
And gwenya kuzvidzora chinhu zano kuti anodzora chinzvimbo, nokukurumidza uye torque ane zvokuimba tikachirega. It rakagadzirirwa inofamba kudzora dzemagetsi Motors. It ane otomatiki hutachiwana uye Chinyorwa kutanga uye zvokurega injini, uye kusarudzwa uye kuchinja kuti nokukurumidza.
Also kutarisirwa kusarudza kana mberi kana kuzvishandura majana pamusoro overloads uye zvavanokanganisa, uye kuchinja torque. Mumwe electric motor iri vakagadzirira pamwe regulator kuti ane zvakasiyana mabasa uye zvinhu. Achipindira injini anotonga kungabatsirawo kudzivirira makuru Motors vane zadzisa kana pamusoro ano ezvinhu. Izvi zvinoitwa ane zadzisa ataure kudzivirira kana tembiricha vachifunga ataure. Fuses uye dunhu namapoporodzi tiri anobatsira kudzivirira pamusoro ano. Vatyairi injini Automatic vari yaipiwa pamwe muganhu haizoshandisi kudzivirira muchina.
Vamwe kunzwisisa injini controllers zvinoshandiswa kudzora nokukurumidza uye torque Motors zvakabatana. Mune up-loop kuzvidzora, mumwe controller unobereka Positioning yakarurama injini nhamba iri lathe-anodzorwa. Injini controller zvakarurama zvinzvimbo nokuveza chokushandisa kwakavakirwa pre-chiite profile. Zvinoitawo compensates kuti mutoro mamiriro siyana uye anonetsa masimba kubatsira kuchengetedza nzvimbo chokushandisa.
Motor controllers dzinobva chii vakasiya kuita. Pane Chinyorwa chinonzi motor kuzvidzora, otomatiki gwenya kuzvidzora uye gwenya masimba kure. Zvichienderana mugadziri, injini chidhiraivho zvinogona chete kuva pakutanga uye kumira. Asi kune vatyairi vazhinji kuti kudzora injini ine zvakawanda zvinhu. An electric motor kudzora zvinogona Classified maererano mhando injini tichandokandwa kana kudzorwa. Ichi inofamba kudzora servo, danho Motors, rakatumbuka kuitika kana AC kuitika kana DC mumakwenzi kana brushless DC zvachose magineti.